'साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार' संवाद; आकाश गङ्गाको किनार | साहित्यपोस्ट
‘साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार’ संवाद; आकाश गङ्गाको किनार
समाजको ऐनाले जहिल्यै उज्यालो मात्र देखेको छ - अजित उत्सव
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित २६ जेष्ठ २०७९ २०:०१
यहाँ उत्कृष्ट नाैमा छनोट भएको कवितासङ्ग्रह ‘आकाश गङ्गाकाे किनार’का स्रष्टा अजित उत्सवसँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो । साथसाथै भर्खर कविता लेख्दै गरेका या कवितासङ्ग्रह निकाल्ने तर्खर गरेका युवाहरूको लागि पनि हौसलाको कुरा हो । पहिलो कविता कृतिले यसरी पाठक र चर्चित प्रकाशन गृह आदिको नजरमा पर्नु मेरो लागि पुरस्कार जितेसरह ठानेको छु ।
“साहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुरस्कार”का लागि नौ कृति छनोट भएका छन् । अर्थात् तपाईँका प्रतिस्पर्धीका रूपमा बलिया कृतिहरू छन् । तपाईँले पुरस्कार जित्नु वा नजित्नुले तपाईँको साहित्यिक यात्रामा के अर्थ राख्छ ?
वर्षभरिमा नेपाली भाषामा दर्जनौँ काव्य कृति बजारमा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्येमा उत्कृष्ट नौ कृतिमा अटाउनु मेरो लागि जितसरह नै हो ।सबै कृतिहरू एकसे एक अब्बल छन् । यसमा कसले हार्‍यो कसले जित्यो भन्नूभन्दा पनि जसले जिते पनि लेखकले जित्ने हो, काव्यकृतिले जित्ने हो । मलाई आफूले जिते पनि या अरू कसैले जिते पनि तात्विक भिन्नता महसुस हुने छैन । मैले जितेसरह महसुस गरेको अघि नै भनिसकेँ ।
“आकाश गङ्गाको किनार” लेख्नुको तपाईँको मुख्य उदेश्य के हो ? कविता लेखनको अनुभूतिबारे बताइदिनुहोस् न !
जसरी हामी पृथ्बीबाट आकाश देख्छौं, आकाशका तारा, जून र सूर्यको उज्यालो देख्छौं, तर आकाशगंगामा रहेको अँध्यारो पाटो हामीले देख्दैनौँ । त्यस्तै समाजको ऐनाले जहिल्यै उज्यालो मात्र देखेको छ । यही समाजमा रहेको अँध्यारो पक्ष, अँध्यारो जीवन बाँचिरहेकाहरूको यथार्थता, राजनीति र वर्तमान समयको अँध्यारो पक्ष आकाशगंगाको किनारजस्तै रहस्यमयी रूपले दबिंदै र दबाइदै गइइएको छ । मैले त्यही कमजोर पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै बिम्बात्मक रूपमा यो नाम राखेको हुँ ।
कविता लेखन मेरो बालापनदेखिकै सोख हो । म रामायण, महाभारत, गीता, श्रीस्वास्थानी, देवीभागवत्, चन्डी श्लोक र ती श्लोकमा बुबाले हाल्नुभएका लयले प्रभावित हुने गर्थेँ, र यस्तै कहिले लेखुँला ठान्थेँ । पछि विद्यालयमा कविता लेखेर एकाध पुरस्कार पनि पाएको थिएँ ।
पछि बिए पढ्ने क्रममा काठमाडौँमा रहँदा कविता छपाउन पत्रिकाको कार्यालयमा धाउने क्रममा म आफैँ पत्रकार बन्न पुगें । पछि पत्रकारिता लेखन, समाचार वाचन, सम्पादन सिकेर करिब एक दशक पत्रकारितामा पनि संलग्न रहेँ । २०५८ सालमा साहित्य सन्ध्या र गरिमा मासिकमा कविता छपाएर औपचारिक रूपमै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ । जनआन्दोलनमा मेरो कविता र गीत लेखेकी डायरी हराएपछि लामै समय कविता लेख्ने जाँगर चलेन । २०७० पछि भने निरन्तर कविता लेखिरहेको छु ।
तपाईँ कविता किन लेख्नुहुन्छ ? कविताको बजार न्यून भएको चर्चा चलिरहँदा कवितासङ्ग्रह नै किन ?
कविता मेरो मनको आवाज हो । वर्तमान समयको विकृतिमाथिको मेरो आवाज र आन्दोलन पनि हो । म कवितामार्फत बोल्छु, चिच्याउँछु, खबरदारी गर्छु । यही कवितामार्फत प्रेम बाँड्छु, देशप्रेमको सन्देश फैलाउँंछु । कविता बिक्रीका लागि लेखिंदैनन् । कविता बिक्रीको लागि राखिने वस्तु पनि होइनन् । मैले लेखेको कविता देश र जनताप्रति समर्पित गर्नका लागि, एउटा दस्ताबेजीकरणका लागि प्रकाशित गरेको हुँ र आगामी दिनमा पनि यो क्रम जारी नै रहन्छ ।
“आकाश गङ्गाको किनार”ले यो पुरस्कार पाएको खण्डमा प्राप्त आर्थिक राशिले के गर्नुहुन्छ होला ?
यो पुरस्कार प्राप्त गरेँ भने त्यो रकममा आफ्नो पनि केही पैसा थपेर नयाँ सर्जकलाई हौसला प्रदान गर्ने साहित्यिक पुरस्कार स्थापनाकै लागि अक्षयकोषमा राख्ने छु ।
एउटा कवितासङ्ग्रहका लागि कविताहरू सम्पादन गरिरहेको छु । कथासङ्ग्रह पनि यही वर्षको अन्त्यसम्ममा बजारमा आइपुग्ने अपेक्षा छ । त्यसबाहेक केही अरूका लागि कथा लेखिरहेको छु । केही नयाँ सर्जकका कविता सम्पादन गरिरहेको छु । यो लेख्ने क्रम निरन्तर रहनेछ ।
अजित उत्सवआकाशगङ्गाको किनारसाहित्यपोस्ट उत्तम काव्य पुुरस्कार
विश्व नेपाली साहित्य महासंघको भर्चुअल भेला तथा कविता वाचन सम्पन्न